INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi - Bayede News
Isithombe: nguVeli Nhlapo
Izilimi zebele ziyithina kusuka ozwaneni kuya onweleni
INkantolo Enkulu iSouth Gauteng isiyalele iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ukuba ikhokhele inkampani yezokumaketha eyayiyenzela umsebenzi wokukhankasela ukhetho nyakenye izigidi ezi-R102 eyikweleta zona.
Le nkampani i-Ezulwini yenzela i-ANC izingqwembe (PVC banner) zokukhankasa yaphinde yazifaka eziyizi-30 000 njengengxenye yeqhingasu lale nhlangano lokunqoba ukhetho lukazwelonke lwangowezi-2019.
Yafaka izingqwembe ezigxobeni emigwaqeni esifundazweni iWestern Cape sekusele isonto ukuba kube nokhetho. UKhongolose kwakufanele ukhokhe izi-R2 900 ngokufaka uqwembe ngalunye nama-R70 okuzisusa emveni kokhetho.
Kodwa emveni kokhetho uKhongolose wenqaba ukukhokhela le nkampani nakuba yabe seyenze imizamo eminingi ukuba ikhokhelwe.
ISikhulu Esiphezulu sale nkampani yaKwaZulu-Natal, uMnu uRenash Ramdas, emaphepheni eNkantolo uveze ukuthi izincwadi abazibhalela uNobhala jikelele we-ANC, uMnu u-Ace Magashule noMengameli wayo uMnu uCyril Ramaphosa, aziphendulwanga.
Ngakolunye uhlangothi i-ANC ithe ayinawo umthwalo wokukhokhela le nkampani. Ithe isivumelwano le nkampani ekhuluma ngaso asinaso isibophezelo ngoba sasingagunyaziwe uMgcinimafa weqembu uMnu uPaul Mashatile.
Ithe abukho ubufakazi bokuthi uMgcinimafa wasigunyaza isivumelwano noma ubufakazi besiqiniseko sokuthenga.
Ithe: “URamdas wayazi noma kwakufanele ukuba wayazi ukuthi nguye kuphela onelungelo lokwenza isivumelwano.”
Abameli be-Ezulwini bakwaSarlie & Ismail Inc, benze ngakho konke okusemandleni ukuveza ukuthi izikhulu uMnu uNhlanhla Mabaso (iMeneja yezezimali) noMnu uLebohang Nkholise (obhekele ukuthengwa kwempahla) babegunyazwe i-ANC.
Amaphepha ale nkampani athulwe eNkantolo aveza ukuthi uMabaso noNkholise bavumelana noRamdas ukuthi izokwenzela i-ANC izingqwembe eziyizi-30 000. Aphinde aveze imihlangano ebeyenziwa ngoWhatsapp phakathi kukaRamdas, uMabaso noNkholise kuxoxwa ngalo msebenzi.
Ekhipha isinqumo uMehluleli uBhoola uthe uMabaso noNkholise bayavuma ukuthi bayithola imiyalezo evela kuRamdas kepha bayakuphika ukuthi bayiphendula kodwa mhla zingama-27 kuMbasa wezi-2019 ngele-12 emini uNkholise waphendula ngesithombe esiveza isithupha okucacisa ngokusobala ukuvuma izingqwembe eziyizi-20 000 uRamdas athi zasezingatholakala.
Uqhuba athi incwadi uMabaso noNkholise abayinika uRamdas ziyisi-9 kuMbasa wezi-2019 njengobufakazi bokuthi konke kuhamba kahle igcizelela okushiwo i-Ezulwini ukuthi laba babegunyaziwe.
Yathunyelwa kuMashatile nguMnu uFikile Mbalula owayeyiNhloko Yokhetho ku-ANC icela usizo ngokukhokhelwa kwezingqwembe eziyizi-30 000 ezazidingelwa umkhankaso wokhetho. Iveza nokuthi kwakudingeka izigidi ezingama-R87, izi-R2 900 uqwembe ngalunye futhi le ncwadi yayihambisana neyokukhokhelwa komsebenzi evela ku-Ezulwini Investments.
UMehluleli uBhoola unqume ukuthi ubufakazi obuphambi kweNkantolo buqinisekisa ukuthi uMabaso noNkholise babegunyaziwe ukuba bangene ezivumelwaneni.
UKhongolose ube usuyalelwa ukuba ukhokhe imali engaphezu kwezigidi ezi-R102 nenzalo.